China Ampoule Ukuzalisa Imveliso yokuvelisa umgca kunye nabathengisi | IVEN
Ngaba unombuzo? Sinike umnxeba: + 86-13916119950
Umatshini wokuvelisa ibha ethambileyo
Umatshini wokuvelisa isisombululo seBhotile IV
Ibhotile yeglasi IV Isisombululo semveliso
Ampoule Ukuzalisa umgca wemveliso
Umatshini wokugcwalisa ulwelo weVial
Umatshini weSirinji ozalisiweyo (kubandakanya isitofu sokugonya)
ICartridge yokugcwalisa umgca wemveliso
Ibhotile yeglasi eyi-30ml yokuGcwalisa isiraphu kunye noMatshini wokuPakisha woNyango
Isiraphu yokuhlamba umatshini wokugcwalisa
Umatshini wokuHlola wokuKhanya oZenzekelayo we-LVP (ibhotile ye-PP)
Umgca we-Multi Chamber IV Bag Production Line
Imveliso ye-Herb Extraction Production (Artemisinin extraction, CBD extraction)
Isisombululo sePeritoneal Dialysis Solution (CAPD)
Umshini Igazi Collection Line Tube Production
Umgca wokuveliswa kweTyhubhu yeGazi encinci
Ukuqokelelwa kwegazi ngenaliti yomatshini
Isirinji yokuhlanganisa umatshini
Intsholongwane Isampuli Tube Ukuhlangana Line
Umgca weemveliso zeSisombululo seHemodialysis
Umatshini weNdibano ye-Catheter ye-IV
Isityalo se Turnkey
Isisombululo se-IV esine-PVC esithambileyo sesisombululo
I-OEB5 Incology efakwe kwi-vial turnkey isityalo
Iprojekthi ye-IV yokuThambisa iBhotile yeGlasi yokuThambisa
Umshini wokuqokelela igazi we-tube turnkey
Iprojeki yokuvelisa umgca weSirinji yeProjekthi
Unyango lweeseli Iprojekthi yokujika
Inkqubo yoNyango lwaManzi ye-RO
Isisombululo sokuPakisha eziMayeza kunye nezoNyango
Inkqubo yoGcino oluzenzekelayo
Inaliti yokuThintela ukuTshintsha kweLwelo-Ampoule SVP
Umgca wokuvelisa ukuzaliswa kwe-Ampoule uquka umatshini wokuhlamba i-ultrasonic, i-RSM yokucoca umatshini wokumisa kunye ne-AGF yokuzalisa nokufaka umatshini wokutywina. Yahlulahlulwe yayindawo yokuhlamba, indawo yokubulala iintsholongwane, indawo yokugcwalisa kunye nokutywina. Lo mgca wecompact ungasebenza kunye kunye nangokuzimeleyo. Xa kuthelekiswa nabanye abavelisi, izixhobo zethu zinempawu ezizodwa, kubandakanya ubukhulu becala buncinci, ukuzinzisa okuphezulu kunye nozinzo, inqanaba lesiphoso esisezantsi kunye neendleko zokugcina, njl.
Imveliso yeglasi yeglasi.
Yamkela itekhnoloji yokuhlamba amanzi ama-2 kunye nomoya emi-2 kudonga lwangaphandle kunye namanzi ama-3 kunye nemimoya emi-4 eludongeni lwangaphakathi.
Amaqela ama-6 eenaliti zokutshiza anokuhlamba umkhondo, iinaliti zokutshiza zamkele insimbi epheleleyo ye-316L. Inkqubo yolawulo lweServo + umkhono wesikhokelo kunye nebhodi yesikhokelo inika indawo echanekileyo kwinaliti yokutshiza, uthintele ngokufanelekileyo umonakalo wenaliti obangelwe kukungafani.
I-WFI kunye nomoya ocinezelweyo uphakathi, ukunciphisa ukusetyenziswa.
Inkqubo yokuhlamba esemgangathweni:
2.Ultrasonic ngaphambi kokuhlamba
3.Amanzi ahlaziyiweyo: ngaphakathi kokuhlamba, ngaphandle kokuhlamba
Umoya 4.Uxinzelelo: ngaphakathi ukuvuthela
5.Amanzi ahlaziyiweyo: ngaphakathi kokuhlamba, ngaphandle kokuhlamba
Umoya 6.Compressed: ngaphakathi ukuvuthela
7.WFI: ngaphakathi yokuhlamba
Umoya ococekileyo: ngaphakathi ukuvuthela, ngaphandle kokuvutha
9.Compressed umoya: ngaphakathi ukuvuthela, ngaphandle ukuvuthela
Ukucoca kunye nokucoca
Iibhotile ezihlanjiweyo zingena kumatshini wokubulala iintsholongwane kunye nokomisa kancinci ngokufanayo kwibhanti enemingxunya. Dlula kwindawo yokulungiselela ubushushu, indawo yokubulala enobushushu obuphezulu, indawo yokupholisa ngokuthe ngcembe.
Ifeni yokufuma ukufudumeza ikhupha umphunga webhotile ngaphandle, kwindawo enobushushu obuphezulu, iibhotile ziyabulala inzalo malunga nemizuzu emi-5 phantsi kwe-300-320 ℃. Indawo yokupholisa iyapholisa iibhotile ezingenazintsholongwane, kwaye ekugqibeleni ifikelele kwiimfuno zetekhnoloji.
Yonke inkqubo yokumisa kunye nokubulala iintsholongwane isebenza phantsi kweliso lokwenyani.
Lo matshini wamkela inkqubo yokuhambisa inyathelo ngenyathelo kunye nesakhiwo sebhalkhoni.
Umatshini ugqiba ngokuzenzekelayo yonke inkqubo yemveliso:
Ukuhambisa isixhobo sokuhambisa umbane --- Ukutshaja ngaphambili kwe-nitrogen (ngokuzithandela) -Ukugcwaliswa kwesisombululo -Ukutshaja i-nitrojeni yangasemva (ngokuzithandela) -Ukufudumeza kwangaphambili -Ukutywina- Ukubala -Ukugqitywa kweemveliso.
Ampoule Ukuzalisa imveliso eziluncedo
1. Umgca wecompact uyakuqonda ukunxibelelana okukodwa, ukusebenza ngokuqhubekayo ukusuka ekuhlambeni, ekubulaweni, nasekugcwaliseni. Yonke inkqubo yemveliso iyakuqonda ukusebenza kokucoca; ikhusela iimveliso kungcoliseko, ihlangabezana nomgangatho wemveliso ye-GMP.
2. Lo mgca wamkela amanzi kunye noxinzelelo lwe-air cross jet wash kunye ne-ultrasonic wash kwi-inverted state. Iziphumo zokucoca zilungile kakhulu.
3. Itekhnoloji yokuhluza kwi-Ultra isetyenziswa kwifilitha yomatshini wokuhlamba. Amanzi ahlambulukileyo ahlambulukileyo kunye nokucoceka komoya afunyenwe kwisicoci sesiphelo, esinokuphucula ukucaca kwebhotile ehlanjiweyo.
4. Ibhotile kwi-feed auger kunye ne-star wheel zidibana, indawo yokubhabha incinci. I-Ampoule inokuhamba ngqo. I-Ampoule inokuhambisa uzinze ngakumbi kwaye ayinakwaphulwa.
5. I-manipulators ezingena-stainless zilicala elinye. Indawo ichaneke ngakumbi. Abakhohlisi banxibe ubungqina. Xa utshintsha i-pitch ii-manipulators akukho mfuneko yolula kwaye ujike. Ukujika okuzenzekelayo kungcolise amanzi okucoca.
6. I-ampoule yintsholongwane ngomgaqo oshushu wokuhambisa inzalo laminar. Ukuhanjiswa kobushushu kungaphezulu. I-ampoule iphantsi kwe-HDC imeko yokubanda yenzalo ephezulu, ehlangabezana nomgangatho we-GMP.
7. Esi sixhobo samkela umgaqo wokutywina ongathandekiyo wokutywina isihluzi esisebenzayo esetyenziselwa ukucoca itonela. Icebo lokucoca ulwelo kulula ukulifaka elinokuqinisekisa imeko yekhulu lokucoca.
8. Izixhobo zamkela uhlobo lwehenjisi lobushushu besihlalo kunye nolwakhiwo lwefeni yomoya oshushu othe tye. Ukugcinwa kwezixhobo kulunge ngakumbi kwaye kusindisa abasebenzi.
9. Esi sixhobo samkela ibhanti ehambisa ikhonkco ngecala. Ukuhambisa ibhanti akuyi kuba ngumkhondo, anti-creeper, akukho bhotile iwayo.
10. Izixhobo zamkela itekhnoloji yangaphambi kwexesha njengokugcwaliswa kwenaliti, ngaphambili kunye nokutshaja kwe-nitrojeni kunye nokutywinwa kwentambo, ezinokuhlangabezana nomgangatho wohlobo lweemveliso.
11. Umatshini wokugcwalisa itywina wamkela ubume bebhalkoni. Ivili leenkwenkwezi lokondla kunye nokudlulisa iibhotile ngokuqhubekekayo, ukusebenza kwezixhobo kuzinzile kwaye kungaphantsi kokuqhekeka kwebhotile.
12. Esi sixhobo sixhaphakile. Ayinakusetyenziselwa i-ampoule eyi-1-20ml. Indawo ezitshintshayo zilungile. Okwangoku, izixhobo zinokusetyenziswa njengokuhlamba ibhotile, ukugcwalisa kunye nokufaka umgca wecompact ngokutshintsha isondo lokungunda kunye nevili lokutya.
Ukucaciswa okusebenzayo I-1-20ml B yohlobo lwee-ampoules ezihlangabezana nomgangatho we-GB2637.
Umthamo omkhulu 7,000-10,000pcs / h
Ukusetyenziswa kweWFI 0.2-0.3Mpa 1.0 m3 / h
Ukusetyenziswa komoya oxineneyo 0.4Mpa 50 m3 / h
Amandla ombane I-CLQ114Vertical ultrasonic umatshini wokuhlamba: 15.7KW
RSM620 / 60 Ukucoca kunye nomatshini wokumisa i-46KW, amandla okufudumeza: 38KW
AGF12 Ampoule ukugcwaliswa nokutywina umatshini 2.6KW
Imilinganiselo I-CLQ114 Vertical umatshini wokuhlamba i-ultrasonic: 2500 × 2500 × 1300mm
RSM620 / 60 Ukucoca kunye nomatshini wokumisa: 4280 × 1650 × 2400mm
I-AGF12 Ampoule yokugcwalisa kunye nokutywina umatshini: 3700 × 1700 × 1380 mm
Ubunzima I-CLQ114 Vertical Umatshini wokuhlamba i-ultrasonic: 2600 Kg
RSM620 / 60 Ukucoca kunye nomatshini wokumisa: 4200 Kg
I-AGF12 Ampoule yokugcwalisa kunye nokutywina umatshini: 2600 Kg
*** Qaphela: Njengoko iimveliso zihlaziywa qho, nceda unxibelelane nathi ngeenkcukacha zamva nje. ***
Egqithileyo Umatshini wokugcwalisa ulwelo weVial
Okulandelayo: Umatshini wokuvelisa isisombululo seBhotile IV
Non-PVC Soft Bag Umatshini
Non-PVC Soft Bag Ukwenza
Non-PVC Soft Bag OEM
Isirinji egcwaliswe kwangaphambili
Umatshini wokuHlola weSirinji ozalisiweyo
Abavelisi beSirinji abazalisiweyo
Umnxeba:+86 21 58716151
Idilesi: NO.201, New Jinqiao Rd, Pudong, Shanghai, China
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushu - Imephu yendawo
Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji,